ညီအစ်ကိုတို့၊ အာရှိပြည်၌ ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းတည်းဟူသော အသက်မလွတ်နိုင်ဟု ထင်ရ၍၊ မခံနိုင် အောင်အတိုင်းထက်အလွန်လေးသောဆင်းရဲခံရကြောင်းကို သင်တို့မသိဘဲနေစေခြင်းငှါ ငါတို့အလိုမရှိ။ ငါတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုအစဉ်မကိုးစားဘဲ၊ သေသောသူတို့ကို ထမြောက်စေတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားမည်အကြောင်း သေစေဟု စီရင်ခြင်းကို ကိုယ်တိုင်ခံရသကဲ့သို့ဖြစ်၏။ (၂ကော ၁း ၈-၉)
သခင်ယေရှုနာကျင်ခံစားနေပါသလား ? သခင်ယေရှုမှာ တခါတရံအထီကျန်တယောက်ထဲရှိနေခြင်း၊ စာတန်ရဲ့နှောက်ရှက်မှုကြောင့် စိတ်အားငယ်စရာများ၊ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ၊ မကောင်းဆိုးဝါးများနဲ့ဆုံရခြင်း၊ မတရားစွတ်စွဲခံရမှုများ ဖြစ်နေပါသလား၊
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာလည်း ဒီလို နာကျင်ခံစားနေမှု၊ တခါတရံအထီကျန်တယောက်ထဲရှိနေခြင်း၊ စာတန်ရဲ့နှောက်ရှက်မှုကြောင့် စိတ်အားငယ်စရာများ၊ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ၊ မကောင်းဆိုးဝါးများနဲ့ဆုံရခြင်း၊ မတရားစွတ်စွဲခံရမှု အဖြစ်မျိုးတွေ မလွတ်ကင်းနိုင်ပါဘူး။ ဘုရားရှင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္တာမှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍန်တော်ကို ပျိုးထောင်ပြုစုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ခံစားခဲ့ခြင်းအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ လက်ခံ၊ခံစားနိုင်ရပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးများဟာ ဘုရားသခင်ဖန်တီးပေးတဲ့နာကျင်ခံစားမှုများလား? ဘုရားဟာ ဒီလိုမကောင်းဆိုးဝါး၊ နာကျင်မှုများကို မပေးပါဘူး။ သို့သော် ဘုရားဟာ ခက်ခဲ့၊မှောင်မိုက်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများအထဲက ကောင်းမြတ်ခြင်းရရှိစေနည်းကိုတော့ ပြသပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကို ပိုမိုယုံကြည်အားကိုးလာစေပါတယ်။ ယုံကြည်သူအချင်းချင်းပိုမိုနီးကပ်စေပါတယ်။
ကဲ .. နာကျင်၊ခက်ခဲမှုများကြုံတွေ့ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ
၁။ အားငယ်၊အားနည်းအောင်လုပ်သူများကို ငြင်းဆန်၊ရှောင်ရှားပါ၊
၂။ ဘုရားရှင်ဟာ ကျွန်ုပ်အနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိရပါ
၃။ ဘုရားရှင်ကို လုံးဝအားကိုးပြီး၊ ဘုရားရဲ့ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်မှုနဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး နာကျင်ခက်ခဲနေချိန်များရှိပါတယ်။ ယေရှုကိုယုံကြည်သူများအဖို့ အခြားသူများနဲ့မတူတာကတော့ အရိပ်မဲအောက်မှာမရှိနေပဲ ယေရှုရဲ့အလင်းအောက်မှာရှိနေခြင်းပါပဲ။
Translated by မောင်သာမန် to Burmese - Rick Warren "Daily Hope"